यसपटकका लागि एकपटक देशको चिता जल्ने खड्को टर्यो ! – हिमालयन ट्रिबुन
२०७७ आश्विन २५, आईतवार ०४:१४
यसपटकका लागि एकपटक देशको चिता जल्ने खड्को टर्यो !
HT २०७७ आश्विन २५, आईतवार ०४:१४
डा. गोविन्द केसीले ६ बुँदे माग राखी जारी १९औँ अनसनको २७ औँ दिनमा मध्यरातमा हिजो डा केसी र सरकारी वार्ता टोली बीचको ८ बुँदे सहमति हुदै अनसन हुन पुगेको छ। आज बिहान ९ बजे अनसन तोडिन्छ। जिद्दी यसरी नै अघि बढेको भए डा केसी, नेताहरू सरकार र सत्तारूढ दलको मात्रै हैन त्यो लप्काले देशको चिता पनि जल्ने थियो। त्यो टरेकोमा सन्तोषको सास फेर्न पाईएको छ।
२७,२७ दिनको आजसम्मको सबैभन्दा लामो अवधिको सत्याग्रहले बुढ शरीरका डा केसीको स्वास्थ्य जटिल मोडमा पुगिसकेको थियो, कुनै क्षण जे पनि हुन सक्थ्यो। खड्को टार्ने वार्ताकारहरूलाई धन्यबाद दिनुपर्छ।
सरकार धेरै क्षेत्रमा गैरजिम्मेवारी मात्र हैन अक्षम मात्र हैन, आफू र आफ्नो दललाई पतनको बाटोमा हिडाउन थालेको पनि देखिदै आएको हो। यस पटक पनि सरकार वार्तामा छलछाम गर्ने सूरमा थियो तर देशब्यापी सशक्त जनदबाबका कारणले झस्केर मति फिराएको देखियो। यसरी लापरवाह बन्दै गएर केही अनर्थ हुन पुगेको भए सरकार, तिनका दल र नेताहरूले भर्पाई हुन नसक्ने अक्षम्य र प्रायश्चित्तहिन खति बेहोर्न पर्ने थियो। अब तिनले त्यसी कहिल्यै मजाक नगरून्।
यस्तो पाराको कार्यशैलीले हालका नेताहरूको आजसम्मको योगदानहरू टुकुचामा बग्दै गएको त छँदैछ, तिनलाई यो मुलुकभित्र बसेर बॉकी जिवन सजिलै बॉच्न मुस्किल पर्न सक्थ्यो। कोरोनाको चौतर्फी प्रतिकूल दुष्प्रभावबीच डा केसीको मागको समर्थन र जिवनरक्षार्थ विभिन्न कडा भन्दा कडा कार्यक्रमहरू हुन गईरहेको थियो। सरकारको चौतर्फी अकर्मण्यताले विभिन्न पिडाभोगाईबाट जनता जुर्मुराएका छन्, सरकार र नेताहरूप्रति आक्रोशित र तिरस्कारको मूडमा छन्। अहिले सबै जनताले आआफ्नो तर्फबाट योगदान गरिरहेका देखिन्छन्। सरकारइतरका सबै राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीबीहरू, प्रबुद्ध वर्गहरू डा केसीको जिवनरक्षार्थ अपिल गरिरहेका छन्। कुनै सानो झिल्को मात्रको पर्खाईमा राजनीति संकटग्रस्त हुदै गईरहेको देखिन्छ।
भ्रष्ट मेडिकल माफियातन्त्रको बिरूद्धमा डा केसीले १९औँ पटक यसरी निरन्तर गर्दै आएको जनताले चुनेका भनिएका कथित गलत तत्वको दानापानीबिना बॉच्नै नसकेका प्रतित लोकतान्त्रिक दलहरू र सरकारबिरूद्धकै सत्याग्रहको क्रममा यसरी नै लड्दा लड्दै यदि उनको प्राण गएको भए त्यसपछि नेपाली जनताले भविष्यमा कहिल्यै आफ्नो मुखमा पोतिएको कालोमोसोको पाप पखाल्न सक्ने थिएनन्। नेपाली जनता, दलहरू र नेताहरू सदाका लागि विश्वमै कलंकित हुने थिए। त्यसको भूतले सपनामा पनि तर्साईरहने थियो जसरी विगतको जनयुद्धको त्रासले आजसम्म हजारौँ जनता विश्व र नेताहरूलाई तर्साउने गरिरहेको छ। जसरी अधिकारीपरिवारको झस्कोले तर्साउदै आएको छ। ड्केसी ३ करोड अधिकारी बराबर हुन्, अन्तत: सरकार त्यो बुझेछ।
कमजोर मनस्थितिको अकर्मणय, अलोकप्रिय सरकार र उपलब्धी प्रमाणित गर्न नसकेको गणतन्त्र र संघीयताका साथै तिनका पक्षधर नेताहरूको अवस्था के कस्तो हुने थियो होल त्यो अकल्पनीय छ।
गल्ती भएपछि चुक्चुकाएर पछुताउनु भन्दा गल्ती नै नगर्नु बुद्धिमानी हो। डा केसीलाई आफ्नो प्राणको चिन्ता हैन, देश र गरिब जनता र पिछडिएको क्षेत्रहरूको स्वास्थ्य प्रणाली स्थापना गर्ने कसरी त्यो मात्र चिन्ता हो। जिउदो रहदा पूरा नभएको जनप्रिय मागहरू उनी मरेपछि पूरा गर्ने अभिभारा जनताले आफ्नो हातमा जबरजस्ति लिनपर्यो भने के के हुने थियो होला के के!
हामीले सरकारसंग र जिम्मेवार नेताहरूसंग डा केसीको प्राण रक्षा गर भनेको हाम्रै हितका लागि उनले राखेका मागहरू पूरा गर भनेको हो। जसले जिवननै मेडिकल माफियातन्त्रको बिरूद्ध उत्सर्ग गर्दै आएको छ, उसले आफ्नो प्राण भन्दा मुलुक प्यारो भनेर सत्याग्रह गरेको हो। निर्विवाद, हाम्रो चाहना डा केसी दिर्घायू हुनुपर्छ भन्ने हो, तर डा केसीको आफ्नो चाहना आफू मरे पनि आफू हैन मुलुक दिर्घायू र स्वस्थ रहोस् भन्ने हो। हाम्रा नेताहरूले त आजसम्म मुलुकमा डढेलो लगाएको लगाई गरेर कैयन नेपालीको चितामा आगो लगाएर मजाले आगोको न्यानो ताप्तै आएका हुन्।
अहिले पनि ती नेताहरू आफूहरू क्वारेन्टिनमा बसेर सुरक्षित रहदै हजारौँ जनताको चिताको आगो र ज्वालामा रोटी सेकिरहेका छन् । बिरामी परे पॉचतारे होटेलमा सरकाती दानापानी हसुरीरहेकै छन्। कथं डा केसीको चितामा आगो सल्काउने दुर्भाग्य आईलागेको भने त्यो धेरैका लागि अकल्पनीय महंगो र ईरिभर्सिबल खति हुनेछ, क्षमा हुने थियो। त्यसैले यस्तो जटिल र संगिन राष्ट्रिय खंग्रिएको मुलुकमा जनतालाई नजिस्काउनु बुद्धिमानी हुन्छ। जनताले आजसम्म हाम्रो चितामात्र जल्दै आएको छ, दु:ख मात्र पाईयो भन्ने चित्कार गरिरहेका भनेको सबैले देख्दै सुन्दै आएको छ।
विगत ३ दशकदेखिको नेताहरूले कमाएका उपलब्धीहरू र ती नेताहरू अब चकनाचुर मार्गमा हिड्दै गरेको प्रतीत हुदैछ। तर अचम्म, यस्तो पूर्व कडा संकेतहरू आउदा आउदै पनि अझै तिनीहरूको जॉडको कडा नसा उत्रेको देखिदैन।
सरकार र नेताजीहरू ! यसरी यस्तो अमूल्य अन्तिम क्षणमा डिलमा पुगिसकेको मुलुकमा समय नष्ट नगर। सबैको साथ लिने, माया पाउने उपाय अपनाउ, खोज। कोखमा सर्पैसर्प बिच्छी नै बिच्छीहरू पालेको प्रष्ट देखिन्छ। वार्ताको नाटक धेरै हुदै आएकाहुन्। त्यो झन्झट गर्नुपर्ने नै हैन। डा केसीका मागहरू जनताकाहुन्, सबै यथार्थ र ब्यावहारिक छन्। ऑट नहुनु अर्कै कुरा, तर दुईतिहाइँ सरकारको के औचित्य हो त? ऑट दिन जनताले तेत्रो अकल्पनीय बहुमत दिदै खराब परम्परा र तत्वमाथि बुलडोजर चलाउनु है भनेर पठाएका हैनन् र? अनि किन हातखुटा लगलग कपाएको?
डा केसीलाई मात्र हैन, आफू, आफ्नो सरकार र मुलुकलाई भयंकर दुर्घटनाबाट जोगाउनु पर्छ। यस्तो फाल्नुपर्छ, डा.केसीलाई पाल्ने तिगडम् नगर, किनकि त्यसो गर्नु ३ करोड जनतामाथि तिगडम जालसाजी र छलछाम हुन्छ।
सहमति भएको छ, फटाफट समयाबद्ध कार्यान्वयन गरेर कार्यक्षमता र कार्यकुशलता देखाउ। रत्ति समय खेर नफाल, समय फिर्ता आउदैन। जिवनमा पछुताउने जोहो गर्न तिर नलाग । ती डा केसीका माग हैनन्, ती जनताका माग हुन् यो प्रष्ट बुझ। चुनावमा जितेर एकाध लाख कमबेसी मत पाउदैमा बहुमत जनता यथार्थमा बिपक्षमा हुनेगर्छ लोकतन्त्रमा । जनता बहुमतमा हुदा प्रतिनिधिको टाउको गनेर दंगपर्नु मिथ्याबोध (फेलेसी) हुन्छ। जनता पटकपटक हारेको महसूस गर्दै आउनु खतरनाक हुन्छ। मिठा मिठा वेदान्त प्रवचनजनताले सुन्ने छैनन्। सानो फिलिंगोले घना चारकोशे झाडी सखाप भएर खरानी हुनबाट जोगाउने एकल जिम्मा अहिले सत्तारूदल र सरकारको हो। अरू त तालिपिटुवा दर्शकहरू मात्र हुन्।
एकपटकका लागि खड्को टर्यो। हिजोको जनताको मूड अहिले छैन। जनतामा धेरै आक्रोश, घृणा, असन्तोष र बिद्रोही भावना भूसको आगो जसरी फैलिदै गरेको छ। सरकार सत्तारूढ दलका नेताहरू यसरी ‘क्वारेन्टिन’मा बसेर त केही पनि सल्टिनेवाला छैन। राजनीतिमा अभिनवको टड्कारो खॉचो छ। ‘ब्याक टू मंगलमान’ हुनु नै हाम्रो पुन्पुरोमा लेखिएको हो भने कुरा अर्कै!
Spread the loveकाठमाडौँ । सरकारसँगको आठ बुँदे सहमति डा. गोविन्द केसीले २८ औं दिनमा आइतबार बिहान अनसन तोडेका छन् । शनिबार राति सरकारसँग भएको आठ बुँदे सहमतिपछि आइतबार बिहान डा. केसीले १९औं अनशन तोडेका हुन् । केसीलाई कोरोना संक्रमणपछि निको भएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका ४६ वर्षीय कर्मचारी विकास नेपालीले जुस […]
२०७७ बैशाख १७, बुधबार १३:२५
पार्टी चलाउने दुईवटा तरिका
२०७७ असार १५, सोमबार ०५:५८
सेनाको संख्या २ लाख ५० हजार पुर्याउनुपर्छ